Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo magacaabay guddi cusub
By Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Qoraal kasoo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ayaa lagu magacaabay guddiga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta magacaabay guddiga qaban-qaabada xuska sanad guurada 60aad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya ee 26ka June iyo 1da July.
Wasiirka warfaafinta XFS ayaa loo magacaabay guddoominaya guddiga oo ay xubna ka yihiin wasiirrada Maaliyadda, Gaashaan-dhigga, Amniga Gudaha, Dhallinyarada, Waxbarashada, Shaqada iyo caddaaladda, Guddoomiyaha Gobalka Banaadir, maareeyaha wakaaladda dhismaha, Agaasimaha golaha Wasiirrada, agaasime ku-xigeenka guud ee madaxtooyada iyo guddoomiyaha guddiga wacyi gelinta Qaranka.
Guddiga oo ay howshoodu ku egtahay laba bilood kadib xuska maalmaha xorriyadda, ayey shaqadoodu tahay inay qaban-qaabiyaan xuska maalmaha xorriyadda ee 26ka Juun iyo 1da July ee sanadkaan 2020 iyaga oo kaashanaya madaxda dowlad gobaleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee heer gobal iyo heer degmo, in shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ay ku dhiirri geliyaan muhiimadda ay leedahay xuska maalmaha xorriyadda iyo inay dhisaan guddi hoosaadyo ay ku jiraan howl-wadeenno, xildhibaanno, aqoonyahanno, Salaadiin, ururrada haweenka, ururrada dhallinyarada, jaaliyadda Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Dowlad ku lug-lahayd riditaankii Xasan Cali Khayre oo farta lagu fiiqay
Soomaliya 30.07.2020. 10:40
Ra'iisul wasaarihii kalsoonida lagala noqdey ayaa xafiiska joogay ku dhowaad afartan bilood.
Madaxda DF oo ka jawaabin dalabka maamulada oo tegaya Dhuusamareeb
Soomaliya 14.07.2020. 07:25
Khayre oo laga yaabo in uu gedaal kaga biiro shirka Dhuusamareeb
Soomaliya 07.07.2020. 15:45
Odayaal u afduubnaa Al-Shabaab oo qaarkood kasoo baxsadeen
Soomaliya 11.09.2018. 22:53
DF oo u dabaaldegtay "guul qabyo ah" oo ay ka gaartey deyn cafinta
Soomaliya 26.03.2020. 08:45
RW Khayre: Shirkan oo la isku afgartaa waa Soomaaliya oo xal loo helay
Soomaliya 31.10.2017. 00:24